अन्‍न भण्डारमा छिर्‍यो सलह, नियन्त्रण गर्न छैन विषादी – Makalukhabar.com
२०७७ असार २५, बिहीबार २०:५८
अन्‍न भण्डारमा छिर्‍यो सलह, नियन्त्रण गर्न छैन विषादी
मकालु खबर	 Jun 28, 2020 मा प्रकाशित 59 0
काठमाडौं । मुलुकको अन्न भण्डारका रूपमा रहेका प्रदेश २ र ५ का तराईका जिल्लामा शनिबार सलहका बथान आइपुगेको छ । बाली नष्ट गर्ने फट्यांग्राको हूल सर्लाही, बारा र पर्सामा शनिबार एकैसाथ देखिएको हो । सलह भेटिएलगत्तै प्रदेश २ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राविधिकको टोली खटाएको छ ।
प्रदेश ५ को कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख यामनारायण देवकोटाले दिउँसो ३ बजेपछि सीमा क्षेत्र हुँदै हूलका हूल सलह कीराले रूपन्देहीको आकाश ढाकेको बताए । बुटवल क्षेत्रमा धेरै देखिएको थियो । त्यो क्रम साँझसम्म पनि जारी छ । सलह बुटवलबाट पश्चिम र उत्तर दिशातर्फ लागेको निर्देशक देवकोटाले बताए ।
‘पश्चिम गएको सलह कपिलवस्तु प्रवेश गरेको छ र उत्तरतिर पाल्पासम्म पुगेको छ,’ उनले भने । धेरै आकाशमै उडेको देखिएका छन् । रात परेपछि यी कीरा उड्न नसक्ने भएकाले शनिबार रूपन्देहीको आसपासमै धेरै बास बस्ने उनले बताए । उत्तरतिर चढेका सलह पहाड चढ्छन् वा फर्कन्छन् भन्नेमा विज्ञहरू अलमल छन् । ‘हूलका हूल सलह बुटवल र रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा देखिएका छन् । साँझपख पाल्पा र कपिलवस्तुसम्म पुगेका छन्,’ कृषि विकास निर्देशक देवकोटाले भने, ‘यी रोकिन्छन् कि बाटो लाग्छन्, हामी त्यसको अध्ययनमै केन्द्रित छौं ।’
धान रोप्ने समय भएकाले तराईका धेरै खेत खाली छन् । खेतबारी खाली भएकाले धेरै कीरा आकाशमा मडारिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । रूपन्देहीको देवदह, तिलोत्तमा, रोहिणीलगायत क्षेत्रका मकैबारी र तरकारी बारीमा भने सलह अडिएका छन् । देवदह सिक्टहनका अगुवा किसान राजेन्द्र यादवले खेतमा रहेको तरकारी सबै सलहले ढाकेको बताए । देवदहको चरंगे, खैरेनी, ओमसतियाको वनगाईलगायत क्षेत्रमा रहेका मकैबारी पनि सलह कीराले ढाकिएका छन् । रोप्न ठिक्क पारेको धानको बीउसमेत सलहले खान थालेपछि किसान पिरोलिएका छन् । ‘साँझपख धानको ब्याडभरि एक्कासि कीराले ढाक्यो,’ बुटवलको मोतीपुरकी किसान राधा बेल्वासेले भनिन्, ‘धपाउँदा पनि गएको छैन ।’
कीरा बास बसेको स्थानमा नष्ट गर्न कीरा छोपेर ल्याउने जोकोहीलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँ वडा कार्यालयमार्फत रकम दिने भएको छ । कीरा नष्ट गर्न खेतीबालीमा बसेको वा बास बसेको ठाउँमा विषादी छर्न स्थानीय तह एवं किसानलाई निर्देशन दिएको छ । सलह कीरा मार्न मालाथिन र क्लोरोपाइडी फस्ट विषादी प्रयोग गरिन्छ । ‘कीरा बास बसेको वा खेतीमा बसेका बेला प्रतिलिटर पानीमा दुई एमएल विषादी राखेर घोल छरेमा सलह मर्छ,’ कृषि निर्देशक देवकोटाले भने, ‘पालिकाअन्तर्गतका प्राविधिकले यसबारे किसानलाई जानकारी दिइरहेका छन् ।’
प्रदेश २ का तीन जिल्लामा सलह
सर्लाही, बारा र पर्सामा एकै पटक सलह देखिएलगत्तै प्रदेश २ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अध्ययनका लागि प्राविधिकको टोली परिचालन गरेको छ । कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहका अनुसार अहिले देखिएको सलहले ठूलो क्षति नल्याए पनि आउने क्रम नरोकिए अन्न भण्डारलाई तहसनहस गर्नेछ । ‘प्राविधिक टोलीले सलहबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ मन्त्री साहले कान्तिपुरसँग भने, ‘नार्कका पदाधिकारीसँग पनि जुम बैठक गरेर समस्याबारे सेयरिङ गरिएको छ । उहाँहरूले नै सुझाएअनुसार कीटनाशक औषधि प्रभावित क्षेत्रमा छर्किन सुरु गरिएको छ ।’
सीमावर्ती भारतको विहार राज्यबाट प्रवेश गरेको सलह पर्सामा पनि देखिएको छ । पर्साको पर्सागढी नगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाको केही स्थानमा सहल देखिएको हो । पर्सागढी नगरपालिकाको बढनियार र बिरुवागुठी क्षेत्रमा शनिबार साँझ सलह देखिएको कृषि संयोजक राजकुमार खत्रीले जनाए । ‘दिउँसो जाँदा अधिकांश उडिसेकका थिए,’ कान्तिपुरसँग उनले फोनमा भने, ‘केही कृषकले कीरा समाएर सिसामा राखेका छन् ।’
स्थानीयका अनुसार सलह हूलमा देखिएको छ । वीरगन्जमा पनि फाट्टफुट्ट यो कीरा देखिएको स्थानीयले बताएका छन् । वीरगन्जका रामराज श्रेष्ठले दिउँसो घरकै छतबाट आकाशमा कीरा उडेको भिडियो कैद गरेका छन् ।
सर्लाहीमा पनि शनिबार सलह प्रवेश गरेको छ । शनिबार बिहान लालबन्दीस्थित तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम कार्यालयको परिसरमा लगाइएका विभिन्न बालीहरूमा सलहको झुन्ड देखिएको हो । फौजी कीराले आतंक मच्चाइरहेका बेला सलहको पनि प्रवेशले किसानमा चिन्ता थपेको छ ।
हजारौंको संख्यामा रहेका सलह कीरा सर्लाहीमा तेलबालीको अनुसन्धानका लागि लगाइएका बालीमा छन् । ती कीराले हरियो पात खाइरहेका छन् । ठूलो आवाजसहित दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रबाट शनिबार बिहान सलह आइपुगेको तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. विशेश्वरप्रसाद यादवले बताए । ‘शनिबार बिहान झिसमिसेमै ठूलो आवाजसहित केही आएको सुनियो । बिहान फिल्डमा घुमेर हेर्दा अनुसन्धानका लागि लगाएका बदाम, घैंचा, धानका बेर्नालगायतमा सलह कीराले झ्याप्पै छोपेको देखियो,’ उनले भने, ‘हिजो साँझ केही पनि थिएन, बिहान हजारौंको संख्यामा कीरा आएको रहेछ । यसले हरियो पात खाइरहेका छन् ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाका निमित्त प्रमुख देवानन्द रायले तेलबालीमा देखिएको कीरा सलह नै रहेको बताए । उनले यो कीराले किसानको बालीमा निकै नै क्षति पुर्‍याउने भएकाले यसको नियन्त्रणको प्रयासमा लागेको जानकारी दिए । ‘शनिार बिहान तेलबालीमा हजारौंको संख्यामा देखिएको सलह कीरा नै हो । यसले बालीमा निकै नै क्षति पुर्‍याउँछ,’ रायले भने, ‘फौजी कीराभन्दा पनि खतरनाक भएकाले यसको नियन्त्रणको प्रयासमा हामी लागेका छौं ।’
बारामा चारकोसे जंगल आसपासको आकाश र खेतबारीमा सलहको झुन्ड देखा परेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र यादवले बताए । राजमार्ग छेउको जंगल आसपासमा पर्ने सिमरा एयरपोर्ट र निजगढ क्षेत्रको आकाशमा सलह देखिएको हो । ‘शुक्रबार सलहको एउटा मात्र झुन्ड देखा परेका थिए,’ उनले भने, ‘स्थानीयबाट जानकारी आएपछि त्यस क्षेत्रमा पुग्दा बथान नै देखियो ।’ सानो बथान आउँदैमा डराइहाल्नुपर्ने नभए पनि लगातार धेरै आए क्षति बढ्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रभन्दा करिब ३५ किलोमिटर उत्तर चुरे र जंगल आसपासमा पनि यो कीरा देखिएको छ । यो कीराको प्रकोप भारत, थाइल्यान्ड, पाकिस्तानमा देखा परेपछि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले रोकथाम र अनुसन्धानका लागि केही महिनाअघि कार्यदल बनाएको थियो । जिल्लामा सलह कीरा प्रवेश गरेपछि भने उक्त कार्यदल स्थलगत अध्ययनमा निस्किएको छैन ।
वाग्मती प्रदेशका मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेमा पनि शनिबार सलह देखिएका छन् । मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रको बकैया गाउँपालिकाको १ र २ धियाल र हात्तीसुढे क्षेत्रमा सलह देखिएको गाउँपालिका कृषि शाखाका प्रमुख शिवराज पौडेलले बताए । ‘हात्तीसुढेबाट सलहका बथान छिमेकी वाग्मती गाउँपालिकातर्फ गएको छ, धियालमा देखिए त्यहीँ खेतबारीमा छन्,’ उनले भने । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका २, ३ र ७ नम्बर वडामा पनि सलह आएको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागार्इंले बताए । ७ नम्बर वडाको सुकौराका बासिन्दाले सलह धपाउन आगो बालेर धूवाँ लगाउने काम गरिरहेका छन् ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरका विभिन्न क्षेत्रमा पनि सलह देखिएको किसानले बताए । भडार, भिमान र करकरे क्षेत्रमा सलहको सानो झुन्डमा खेतबारीमा भेटिएको स्थानीय कृषक पदम तामाङले बताए । कमलामाई–२ को मुडेखर्क, सिरवानी, निबुवाटार, कुसुमटारका किसानहरूले मकैबालीमा सलहको झुन्ड रहेको खबर गरेको वडाध्यक्ष नवराज थिङले बताए ।
काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकाको तालढुंगाबाट शनिबार दिउँसो वडा नम्बर २ तिर सलहका बथान उडेको देखिएको कृषि शाखा प्रमुख मनीष वडले बताए । ‘साँझ साढे ५ बजेतिर तालढुंगाको आकाशमा सलहको हूल उडेको देखिएको छ,’ उनले भने । बेथानचोक–१ च्याम्राङबेंसीका सागर दाहालले पनि गाउँमा सलह देखिएको बताए । कान्तिपुरबाट
विषादी छर्केर भगाउन सकिन्छ, तर विषादी छैन
सलह किरालाई नियन्त्रण गर्न ‘मालाथियन ९६ पर्सेन्ट’ विषादी सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । तर, यो विषादी नेपालमा छैन । मन्त्रालयका सचिव डा. भारीले यो औषधि हाल मौज्दातमा नरहेको पुष्टि गरे ।
‘हामीसँग यो औषधि छैन, किन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । जेठ दोस्रो साता नै कमिटी गठन गरेर नियन्त्रणको उपाय खोज्न भनिए पनि नेपालमा यो किरा नै नआउने भनेर प्रतिवेदन दिएकाले सरकारले कुनै पूर्वतयारी गरेको थिएन । जसकारण अहिले यो रोग भित्रिएपछि नियन्त्रणका लागि छर्ने विषादीको अभाव भएको हो ।
त्यस्तै, क्लोरोसाइरिफियस विषादी पनि सलह किरा मार्न प्रयोग हुन्छ । यो औषधि भने नेपालमा उपलब्ध छ । तर, यसले तुलनात्मक रूपमा कम किरा मार्ने प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्वप्रमुख डा. डिल्लीराज शर्माले बताएको समाचार नयाँ पत्रिकामा छ । ‘क्लोरोसाइरिफियस विषादी पनि पर्याप्त मात्रामा छर्न सकिन्छ, तर ढिला गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सलह किरा दिनभर बाली खाने र साँझ परेपछि एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्ने गर्छन् । त्यसैले सलह किरा बसेको ठाउँमा स्प्रेका माध्यमबाट विषादी छर्केर मार्न सकिन्छ । ‘शनिबार बिहान भित्रिएको किरालाई मार्न साँझ नै स्प्रे हाल्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘हामीले यति गर्न नसक्दा ठूलो मूल्य चुकाउँछौँ ।’ तर, शनिबार साँझ विषादी छर्किने बारेमा कुनै तयारी नभएको कृषि ज्ञानकेन्द्र, बाराका प्रमुख जितेन्द्र यादवले बताए । ‘शनिबार नै विषादी छर्ने विषयमा कुनै निर्देशन प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने ।
शर्माका अनुसार सलह किरा बसेको ठाउँमा ठूलो आवाजमा म्युजिक बजाएर पनि भगाउन सकिन्छ । तर, एक ठाउँबाट भगाएको किरा अर्को ठाउँमा बस्ने भएकाले देशको सिमाना नै कटुन्जेलसम्म सबै ठाउँबाट ठूलो आवाजमा म्युजिक बजाउने वा किसानले ड्रम, थाललगायत बजाएर भगाउन सक्ने उनले बताए ।
दैलेखका २०५ संक्रमितले जिते कोरोना, फर्किए घर
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज, यी एजेण्डामा हुनेछ छलफल !
काठमाडौंमा पनि घट्यो संक्रमित दर, आज जम्मा ५ जना थपिए
सांसदबाट निष्कासित भइन् सरिता गिरी, रिक्त भयो पद